Ancelotti oo si caqli-gal ah uga hadlay ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or ee Lionel Messi – Gool FM
Dajiye November 30, 2021
(Madrid) 30 Nof 2021. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay xiddiga reer Argentina iyo naadiga Paris Saint-Germain ee Lionel Messi, kaddib markii uu ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or.
Dhinaca kale Carlo Ancelotti ayaa muujiyay inuu ku kalsoon yahay suurtogalnimada uu xiddiga reer France ee Karim Benzema ugu guulaysan karo abaal-marinta Ballon d’Or.
Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa xalay lagu guddoonsiiyey Lionel Messi abaal-marinta laacibka ugu fiican kubbada cagta adduunka ee Ballon d’Or 2021.
Lionel Messi ayaa xalay ku guuleystay abaal-marintan Ballon d’Or, waxaana uu ku garaacay xiddigaha kala ah Robert Lewandowski iyo Jorginho.
Dad badan ayaa dhaleeceeyay ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or ee Lionel Messi, maadaama ay u arkaan inuu kaga mudnaa Robert Lewandowski, marka laga soo tago Jorginho iyo Karim Benzema.
Carlo Ancelotti ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka Real Madrid ay habeen dambe la ciyaari doonto kooxda Athletic Bilbao horyaalka La Liga, ayaa wuxuu yiri:
“Waa inaad si cadaalad ah u qiimeysaa codeyntan, Messi ayaa ku guuleystay abaal-marinta, welina waa ciyaaryahan kale.”
Ciyaartoyda, baasaboorka gaarka ah ayaa muhiim u ah, laakiin haddii aysan ku guuleysan, waxba ma dhacayaan, guud ahaan, waxaan rajeyneynaa in sanadka soo socda ciyaaryahan Madrid ah uu ku guuleysto.”
“Benzema waxa uu soo qaatay xilli ciyaareed fiican, waxa uu ku dhameystay kaalinta afaraad, waxaana hubaal ah inuu sii wadi doono shaqada si uu isugu dayo inuu noqdo lambarka koowaad.”
“Miyaan u codeyn lahaa Messi?, uma codeyn karo ciyaaryahan ka yimid meel ka baxsan Madrid, haedii aan codeyn lahaana, codkeyga ugu horeeya wuxuu ahaan lahaa Benzema, kaddib Vinicius Jr, waxaa ku xiga Courtois, kaddib Casemiro, Kroos iyo Camavinga”.
Horudhac: Watford vs Chelsea... (Rikoorrada ay sameyn karaan Ranieri, Lukaku & Werner oo loo daawan doono kulanka caawa)